बाँच्ने थिए सुर्खेतका कोरोना संक्रमित युवा तर यसरी ‘११ औं मृ’तक’ बनाइयो – Online Nepal
June 6, 2020 257
काठमाडौं। सुर्खेतमा कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गु’माएका युवकको परीक्षणमा त्रु’टिका कारण ज्यान गएको देखिएको छ । उनी संक्रमित भएर पनि आ’रडिटी परीक्षणले उनलाई संक्रमित नभएको देखाएपछि उनी ढु’क्कसँग बसेको र भित्रभित्रै उनको शरीरमा भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएको पाइएको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. १ हाँसेगाउँका २० वर्षीय युवको कोरोनाबाट मृ’त्यु भएको थियो ।उनी भारतबाट फर्किएका हुन् । नेपाल आएसँगै उनी १४ दिनसम्म नगरपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बसे ।
क्वारेन्टाइनमै उनको आरडिटी परीक्षण गरियो तर नतिजा नेगेटिभ आयो । आरडिटी नेगेटिभ आएका उनले १४ दिनको क्वारेन्टाइन बसाइ पनि पूरा गरे । क्वारेन्टाइन अवधि सकिएपछि उनलाई ‘स्प’स्थ’ मा’नेर घर पठाइयो । उनी पनि आफू सु’रक्षित रहेको ठा’नेर घर गए तर उनलाई संक्रमणले भित्रभित्रै खा’इसकेको थियो ।घर गएका उनलाई आधा रातमा ए’क्कासी अ’सहज भयो । रातको करिब २ बजे सा’स फे’र्न स’मस्या भएको बताएका उनको उपचार नपाएरै त’त्कालै ज्यान गयो । मृ’त्युपछि बिहीबार उनको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइयो जहाँ उनी संक्रमित रहेको पुष्टि भयो ।
पुष्टिसँगै उनी नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाउने ‘११ औं मृ’तक’को रुपमा द’र्ता भएका छन् । मृ’तकका आफन्तले परीक्षणमा ला’परबाही गरिएका कारण मृ’त्यु भएको बताएका छन्। परीक्षणमा ला’परबाही भएको यो पहिलो घ’टना भने होइन ।यस अघि दैलेखका एक युवको पनि कोरोनाबाट मृ’त्यु भइसकेको छ। ती युवकको पनि मृ’त्यु भएपछि मात्र पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। दु’ल्लुमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका ती युवकको पनि परीक्षण र उपचारमा गरिएको ला’परबाहीबाट ज्यान गएको थियो। अहिले पनि कर्णालीमा अ’धिकांशलाई आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाउने गरिएको छ।
Prevअसार १ गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने प्रस्ताव
Nextनेपालमै कोरोनाको औषधिको परीक्षण प्रक्रिया सुरु: डब्ल्युएचओले दियो १६ पृष्ठको सुझाव
निधारले बताउँछ तपाईको भाग्य, जान्नुहोस् कस्तो निधार भएको मानिस कस्तो ?
क्षाबन्धन बाँधिदिन घरघरमा गए पण्डितलाई २७ दिन क्वारेन्टीनमा राखिने !